Faahfaahin la xiriirta dagaalo xoogan oo saaka qarxay degemada Dayniile ee Muqdisho – SBC
Faahfaahin la xiriirta dagaalo xoogan oo saaka qarxay degemada Dayniile ee Muqdisho
Posted by editor on October 20, 2011 Comments
Dagaalo aad u culus oo la isku adeegsadey noocyada kala duwan ee hubka ayaa saaka waaberigii ka qarxay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo ku dhaw dhaw.
Dagaaladan ayaa u dhaxeeya ciidamada dawlada KMG Soomaaliya oo kaashanaya kuwa AMISOM iyo xoogaga xarakada Al-Shabaab waxaana dagaalku uu yimid ka dib markii ciidamada isbahaysanaya ay weeraro ku eekeyeen fariisamada kooxda Shabaabka ee deegaanadaasi.
Ciidamada AMISOM oo gudaha u sii galaya degmada Dayniile
Dirirtan oo la isku adeegsadey noocyada kala duwan ee hubka sida Daabaabaadka dagaalka, baabuurta ay ku rikab yihiin qoryaha lidka dayuuradaha, boobayaasha & hub kale ee daran dooriga u dhaca ayaa geystey khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaarey dhinacyadii dagaalamayey iyo waliba dad rayid ah oo ay galaafteen hubkiiu la iswaydaarsanyayey.
Warar SBC ay ka heshay dad wargal ah oo ku sugan deegaanada lagu dagaalamayo ayaa muujinaya in khasaare dhimasho oo badan in uu soo gaaray dhinacyada dagaalamaya, iyadoo dadka aynu la xiriirnay inuu xaqiijiyeen inay arkeen meydadka askar ka tirsan ciidamada AMISOM oo wata dareyskoodii oo ay la sii cararayaan kooxda Shabaabka, sidoo kale dadku waxay shegeen in ay arkeen meydadka ciidamada dawlada KMG.
Sidoo kale wararku waxay sheegaan inj goobo ay horey ugu sugnaayeen xoogaga Shabaabka laga saarey oo ay dib ugu gurteen gudaha Dayniile isla markaana iska caabin xoogan ay ka wadaan halkaasi.
Abaanduulaha ciidamada Dawlada KMG Soomaaliya C/kariim Yuusuf Aadan (Dhagebadan) ayaa sheegtey in ay ciidamadiisu & kuwa AMISOM ay dagaal ku qaadeen deegaano ay ku sugan yihiin wax ugu yeeray khawaariijta waxaana uu sheegay in ay jab weyn u geysteen ayna ka qabasadeen Dayniile & goobo kale.
Laakiin hadal kaasi ka duwan ayaa ka soo yeeray afhayeenka ciidamada Shabaabka Sheekh Cabdicasiis Abuu Muscab, isagoo sheegtey in ay ay jabiyeen sida hadalka uu u dhigey ciidamada gaalada ee ku soo duuley fariisamadooda, waxaana uu sheegay inay dileen 50 askari oo isagu jira kuwa dawlada KMG & AMISOM, waxaana uu sheegay inay saxaafada u soo bandhigi doonaan meydadka askarta AMISOM oo ay dileen iyo waliba qalab ay ka qabsadeen.
Dagaaladii saaka ka bilowdey degmada Dayniile ayaa waxay u socdaan si hakad ah iyadoo la soo sheegayo in xoogaga Shabaabku ay difaac adag ka xirteen inta u dhaxaysa Isbitaalka Dayniile & xarunta degmada Dayniile, iyadoo la soo sheegayo in haatan ay u muuqanayso in ay Shabaabku hakiyeen xawaarihii ay saaka ku soo galeen degmada Dayniile ciidamada dawlada & kuwa AMISOM.
Ciidamada dawlada KMG iyo kuwa AMISOM ayaa la xaqiijiyey inay si buuxda ula wareegeen afaafka hore ee degmada Dayniile, xaafadaha Tiida & Bagalo waxaase ku adkaatey inay gaaraan bartamaha degmada Dayniile waxaana halkaasi ay kala kulmeen iska caabin xoogan.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa dawlada KMG ayaa dagaalka u adeegsanaya madaafiic & waliba Taangiyada dagaalka waxaana sidoo kale Shabaabku ay adeegsanayaan qoryaha P10-ka & 107 ama jiibka iyagoo godad waa weyn oo dhufeysto ah ka qotey deegaanadaasi oo u badan dhul ciid ah oo dhir badan.
Wararkii ugu dambeeyey dagaaladaasi oo muuqaal ah goor dhaw kala soco SBC Insha ALAAH.